नेपाल आइडलको भोट नगन्न अदालतको आदेश, अब के हुन्छ नेपाल आइडल ? (फैसलाको पाठ सहित) - Deshko News Deshko News नेपाल आइडलको भोट नगन्न अदालतको आदेश, अब के हुन्छ नेपाल आइडल ? (फैसलाको पाठ सहित) - Deshko News
नेपाल आइडलको भोट नगन्न अदालतको आदेश, अब के हुन्छ नेपाल आइडल ? (फैसलाको पाठ सहित)
एपी वान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल आइडल विरुद्ध दायर रिटमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले शुक्रबारसम्म भोट नगन्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरको छ ।
भदौ २३ गतेसम्म सो भोट गणना गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । अदालतले भोटिङलगायत सबै सक्कल फाइल लिएर अदालतमा उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दीवाकर भट्टको इजलासले जारी गरेको आदेशमा यस्तो छ